I Kwesịrị Iwube Mobile Mobile ma ọ bụ Mobile Mobile? | Martech Zone
M na-echekarị na ngwa mkpanaka ga-aga n'ụzọ nke ngwanrọ desktọọpụ mana ọ pụtaghị na ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị ahụ na-ebelata. Dị nnọọ na-abụghị, nyiwe na i nwere ike iru mobile ngwa na-aghọ ndị ọzọ oké ọnụ kwa ụbọchị (anyị wuru anyị iPhone App na Appifier maka $ 500)… na ọtụtụ n'ime ha na-akwado ma mbadamba na mobile gafee ọ bụla na ngwaọrụ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu.
Mkpebi dị n’etiti iwulite websaịtị mkpanaka ma ọ bụ ngwa mkpanaka bụcha mkpebi dị iche na azụmaahịa gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ụlọ ọrụ kwesịrị ịzụlite ma iji mee ka ikpo okwu abụọ a dị ike. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu onye ka a ga-ahọrọ, azụmaahịa ga-ebu ụzọ chọpụta ebumnuche ha na akụ ha, wee tụlee ọdịiche dị iche na nkọwa na ndị na-ege ntị ha chọrọ iru. Naanị mgbe ahụ ka azụmaahịa ga-agwa n'ezie usoro mkpanaka ga-eweta uru, uru, na ohere na nnukwu ahịa ekwentị.
Ekwenyere m na onye ọ bụla kwesịrị inwe ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka, n'agbanyeghị ma ị na-ekpebi ịnwe ngwa. Nọmba ndị na-agbanwe agbanwe na ndị mmadụ na-elele email, na-eme nchọgharị na saịtị, ụlọ ahịa na-elele vidiyo si na ha mobile ngwaọrụ karịa mgbe ọ bụla… na nọmba na-eto eto. Ọ bụ ezie na mmepe weebụ mkpanaka na-enye ohere maka mgbanwe, ngwa ka na-enye ọtụtụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
I Kwesịrị Wulite Mobile Mobile ma ọ bụ Mobile weebụsaịtị? by Mgbasa Ozi MDG
Tags: mobile ngwammepe mobilesaịtị mkpanakawebụsaịtị mkpanaka
Jun 21, 2012 na 3: 48 PM
Agwara m ndị ọzọ ka ha lelee anya ma ha ga-achọ ngwa mkpanaka. Echere m na ọtụtụ obere ụlọ ọrụ, ha kwesịrị itinye uche na ibili ezigbo ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka mbụ na-atụle Google na-ata gị ahụhụ maka enweghị otu. Mgbe ahụ, emesịa ma ọ bụrụ na ị hụ mkpa maka ngwa mkpanaka, ịnwere ike ịgbakwunye otu maka ndị ahụ na-agba ọkụ.
email mbinye aka usoro
Jenụwarị 9, 2013 na 4:37 PM
Ajuju na-agbagwoju anya, mana m na-eche na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka bụ nke kachasị mma ịmalite na mgbe e mesịrị ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịga maka App.